BGR - - Tele RELAY တစ်ခု7ဇူလိုင်လ 17 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "7 ဇူလိုင်လ 17 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
BGR -7ဇူလိုင်လ 17 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
ကျနော်တို့မကြာသေးမီရက်အတွင်းအပိုဆုနေ့နှင့်အတူအလွန်အလုပ်များနေကြသည်, ဒါပေမယ့်အခုကိုကျော်မယ့်အကြောင်း, ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန် programming ကိုမှပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ဒီအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါပေးဆောင်ကြောင်းနေ့တိုင်းအကောင်းဆုံး iPhone နှင့် iPad စုဆောင်းပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စမ်းသပ်နိုင်သည်ခုနစ်ကွဲပြားခြားနားသောပရီမီယံက iOS app များကိုရှိသည်နှင့်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့သော။ သင်တို့သည်ဤအပေးအယူအဆုံးသတ်မည်သည့်အခါသိပါတယ်, ဒါအဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့သေချာအောင်လို့မရပါဘူး။
သင်သည်သင်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့် GIF ကိုရုပ်ပုံလေပြင်းတိုက်ခြင်းထဲကနေမျိုးစုံတစျခုခု extract ခွင့်ပြု [2 တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများ] ပထမဦးဆုံး All-In-One ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများအတွက် * Extract မျိုးစုံနေဆဲပုံရိပ်တွေကို
ဗီဒီယိုများအနေဖြင့် * Extract မျိုးစုံနေဆဲပုံရိပ်တွေကို
GIF ဖိုင်၏ * Extract မျိုးစုံနေဆဲပုံရိပ်တွေကို
ဓာတ်ပုံဘက်စအတွက် * Extract မျိုးစုံနေဆဲပုံရိပ်တွေကို
* ဓါတ်ပုံတစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်က Extract
* Save မျှဝေဓါတ်ပုံကိုအလွယ်တကူထုတ်ယူ
* သင်ကပင် collage နှင့်ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးအတွက်ယူပုံရိပ်တွေပြောင်းနိုင်ပါတယ်
သငျသညျတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦးပန်ကာများမှာလျှင်သင်ဒီ app ကိုချစ်လိမ့်မယ်!
ကိုယ့်တိုက်ရိုက် - ရွှေ Edition ကို
ယေဘုယျအားဖြင့် $ 1,99
အစဉ်အဆက်ဖန်တီးအများဆုံးဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ဘဝ Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ် "ငါသည် Live" ။ ကာတွန်းနဲ့ Dynamic အလင်းရောင်နှင့်အရိပ်, နှင့်အချိန်ပိုမို 5000 ပုံရိပ်တွေကိုမှန်ကန်အချိန်ပါ! ယခု Install "i Live" နှင့်တစ်ဦးပေး "သင်၏ကိရိယာဝိညာဉျကို။ "
သင်ကသင်ချစ်ပါဘူး, နောက်သို့မလိုက်ကြပါလျှင်•သူ, မေတ္တာလိုအပ်ပါသည်။ သူ့ကိုအပေါငျးတို့သညျမတ်ေတာသငျသညျ Give နှင့်လည်းသင်တို့ကိုချစ်!
•က Play နှင့်အကောင်းဆုံးမိဘများဖြစ်လာ! သင်၏အဆွေခင်ပွန်းကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့်ဦးဆောင်သူအပေါ်ရ!
ပိုပြီး! အဝတ်အစား, ဂိမ်းများနှင့် gadgets ။ တကယ့်အတှေ့အကွုံအဘို့သင့်ကလေးပျော်ရွှင်စေ!
"အကောင်းဆုံးဘဝ Simulator ကို"
အကောင်းဆုံးဘဝခြင်း simulation ဂိမ်း, အနုပညာရဲ့အကောင်းဆုံး!
အဆိုပါကလေးသည်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပျော်စရာနှင့်အတူ ပို. ပို. ကြီးထွားလာ!
အဆိုပါဂိမ်းယခု3လအတွင်းသူငယ်၏အသက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဂီတနှင့်ဆိုးကျိုးများဂိမ်းထူးခြားတဲ့, အပြောင်းအလဲများကို၏လေထုစေခြင်းနှင့်နေ့၏အချိန် adapts
- ---------------- -----------------
ကုမ္ပဏီမူဝါဒအရ, ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာများပါဝင်သည်။ လျှောက်လွှာကိုသာဝယ်ယူမှုသင့်ရဲ့ device မှရွေးချယ်နိုင်နဲ့ disabled ဖြစ်နိုင်သည်။
ရပ်ရွာနှင့်မွမ်းမံမှုများအပေါ် Follow https://www.facebook.com/IlivegameEng
တိုးတက်မှုနှုန်း developer များအားဖြင့် update လုပ်ပါလိမ့်မည်
ရရှိနိုင်ဘာသာစကားများ:, အီတလီ, အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, စပိန်, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ (BRA) [BRA] 19659022] ငါအသက်ရှင် Download - ရွှေ Edition ကို
အဆိုပါ application ကိုမှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု, ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းသည်အသုံးနှင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအဖြစ်ကို iOS လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်။ အဆိုပါအမြန်နှုန်းပြကိရိယာများ၏ Display ကိုအဖြစ်အမြင်အာရုံခြွင်းချက်, ညွှန်ပြချက် LED, 3D အရက်ဆိုင်, ကာတွန်းဘက်ထရီအားသွင်း diagrams, အတောက်ပ charger ကို LED သည်တစ်ဦးကြွယ်ဝသောအမြင်ပုံရိပ်တွေပူဇော် သင့် iOS device ကိုအတွင်းအပြင်သင့်ရှေ့မှာတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးအဖြစ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ applications များ၏ $$ ကျော်တစ်သန်းကျေနပ်မှုအသုံးပြုသူများအ $$
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအသက်သေခံချက် ## တချို့က ##
တကယ် $ ဒီ App ကို Get !!
] ငါအေးမြအစွန်း၏ရုပ်ပုံကိုကြိုက်တယ်။ သင်ဦးနှောက်က Apple iPad နဲ့ iPhone အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်။ ဒီ app ၏စည်းမျဉ်းများ။
$ လူပျို App ကို!
ဂရိတ် tool ကို! သင့်ရဲ့ရီစရာရှည်လျား standby အချိန်သည်နှင့်သင့်ကိရိယာ၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာစောင့်ရှောက်။
- Spader1969 ။
System ကို Activity ကိုစောင့်ကြည့်အများဆုံးပြည့်စုံ All-In-One status ကိုစစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ရာက App Store, ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်, ထိုကဲ့သို့သော IP လိပ်စာနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလိပ်စာအတိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်သတင်းအချက်အလက်, အကြံပေးချက်များအပေါ်ဗုံ, ရှိသမျှစနစ်ကသတင်းအချက်အလက်နှင့်အပေါ် ယင်းကို iOS device ကိုမှာအသုံးပွုတဲ့အာကာသ။
သငျသညျတိကျစွာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဤလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါအသုံးပြုသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အာကာသနှင့်အသုံးပြုစောင့်ကြည့်ဘဝ။ စနစ်တကျအပြည့်အဝတာဝန်ခံများအတွက်ဒီ app ကိုသုံးပြီးဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဘက်ထရီကောင်းတစ်ခုဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုရ။
1 ။ ဘက်ထရီအပေါ်အကြံပေးချက်အိုင်ဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်။
2 ။ သင်အကြိုက်ဆုံး applications များ၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုမြင်ဘက်ထရီနှိပ်ပါ။
3 ။ သင့်ရဲ့ iPhone / iPod ကိုပေါ်အသုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အာကာသပြသထားတယ်။
4 ။ အဆိုပါဝယ်ယူအိုင်ပီလိပ်စာနှင့်သင့်ကိရိယာ၏ဟာ့ဒ်ဝဲလိပ်စာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ ရှည်လျားသောထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းကိရိယာအကြောင်းအချက်အလက်များ၏စာရင်း, ဟာ့ဒ်ဝဲသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ထက် ပို. ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသောအတိုင်း, iPhone ကို၏အသုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှတ်ဥာဏ်ပြသထားတယ်။ အခြား application များက။ ဤသည်အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကာတွန်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာပြထားပါသည်။ အိမ် button ကို double-ကိုအသာပုတ်နှင့်အသုံးပြုမှုအခြား application များကြည့်ပါ။ အခြား application ပိတ်ပြီးနှင့်အမြန်နှုန်းပြကိရိယာမရရှိနိုင်ရရှိနိုင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတိုးညွှန်ပြသည့်အခါမှတ်ဉာဏ်ဤလျှောက်လွှာအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြောင်းရှာပါ။
ဒါဟာအသုံးပြုသောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏညွှန်း, အပြာ, အစိမ်း, အဝါနှင့်အနီနှင့်အတူတစ်ဦးနဲ့ LED ရှိပါတယ်။ ။
အသုံးပြုတဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပြိုပျက်ရာများအတွက် 3D အရက်ဆိုင်ကိုဖေါ်ပြဖို့အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကို Double-ထိပုတ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့၏က iOS device ကိုပေါ်, ကြိုးတက်ကြွစွာနဲ့မလှုပ်မရှား, အခမဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုချစ်။
ဒီအမြင်, လုံးဝအားသွင်းခြင်းနှင့်အပြည့်အဝဝန်မှဓာတ်အားအချိန်ရရှိနိုင်ဘက်ထရီဥတုပြသထားတယ်။ တစ်ဦးအမြန်တာဝန်ခံဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, တစ်ဦးအရိပ်အယောင် "အပြည့်အဝ Loading" ဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိပ်ပေါ်မှာအလင်းပြားသင်ရရှိနိုင်ဘက်ထရီများ၏အဆင့်ကိုပြောပြသည်။
စတာတွေဟာ 3G အတွက်ဘက်ထရီစကားပြောချိန်၏လက်လီရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြမှဘက်ထရီအညွှန်း, ဗီဒီယို, ဂိမ်းများ, ထိပုတ်ပါ အခါဘက်ထရီအတွက်ပါဝါ Blink 19659006] ကာတွန်းဘက်ထရီ Loading
ဒါဟာသင့် iOS device ပေါ်တွင်အသုံးပြုသောအာကာသနှင့်ရရှိနိုင်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးပိုင်ဇယား၏ပုံစံအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါမြင်ကွင်းကိုသတင်းအချက်အလက်:  ဒါဟာယခုကဲ့သို့သော system သတင်းအချက်အလက်, ကင်မရာသတင်းအချက်အလက်, Display, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအဖြစ်, ကိရိယာတွေအကြောင်းပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကို Wi-Fi သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာကွန်ရက်ကနှင့်၎င်း၏ IP address ကိုချိတ်ဆက်ရှိမရှိဖော်ပြသည်။
stream ဂီတ Player ကို
stream တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်နားထောင်ခြင်း, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်မိုဃ်းတိမ်၌ဂီတအတွေ့အကြုံထပ်တူပူဇော်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကို access ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့ဂီတအပေါ်အာကာသကယ်ဖို့ထိုကဲ့သို့သော Box ကို Dropbox, Google Drive ကိုနှင့် OneDrive Yandex.Disk အဖြစ် cloud storage နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်နှစ်သက်တဲ့ cloud storage ပေါ်မှာရှိသမျှဂီတ Download လုပ်ပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ဂီတနဲ့ချိတ်ဆက်နှင့်ပျော်မွေ့ဖို့ Stream ကိုအသုံးပြုပါ။
အင်တာနက်မလိုဘဲဖတ်ရှုသင့်ရဲ့ iPhone မှဒေသခံ Wi-Fi transfer သို့မဟုတ် download, ဂီတကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ iTunes ကိုမရှိဘဲသင်၏ကိရိယာသည်သင်၏ဂီတ Add (အော့ဖ်လိုင်း mode ကို) ။ ဒါဟာ multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်မသက်ဆိုင်၎င်းတို့၏တည်နေရာ, ဂီတ streaming များစာရင်းဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
iPhone, iPad, iPod စာကြည့်တိုက်, Box ကို Dropbox, Google Drive ကို, OneDrive, Yandex.Disk: အားလုံးသင့်ရဲ့ Device များပေါ်တွင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုသွားပါ။ နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ။ အဆင့်မြင့်နှင့်အစွမ်းထက်မီဒီယာပလေယာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဂီတ post
- အပြီးအစီး Media Player ကို
- အိပ်စက်ခြင်း timer
- ပြသမှုသော့ခတ် screen ပေါ်မှာထိန်းချုပ်
- BassBooster နှင့်အတူတန်းတူညီမျှရေး
- ပိုလက်တွေ့ကျ 20 equalizer ရလာဒ်ကဒိ
- ပြောင်မြောက်ပေး Audio Visual
- သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းများကို Create
- သင့် iPod ကိုစာကြည့်တိုက်ကနေသွင်းကုန်ဂီတ
- သီခငျြးမြားအဘို့အစာရွက်ဂီတ, အယ်လ်ဘမ်များ, အနုပညာရှင်တွေ
- လွှဲပြောင်း Wi-Fi
- လွှတ်တင်ခြင်းနှင့် download, ဂီတ, ပုံများ, မော်ကွန်းတိုက်
] - ထောင့်ကွက်
- Dropbox ကို
- Google Drive ကို
- Move အမည်ပြောင်းသို့မဟုတ် delete ပုဒ်နှင့်သီချင်းများ
- အနုပညာရှင်, ခေါင်းစဉ်, အယ်လ်ဘမ်အားဖြင့်ရှာရန်
- ဖိုင်တွဲများ Create နှင့်စီမံခန့်ခွဲ
Stream ဂီတ Player ကို Download လုပ်ပါ
စာသားမ Curve: မြို့ပတ်ရထားစာသားကို
[စာသား Curve] သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်လှပသောကွေးကျမ်းကိုထည့်သွင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ ခါးဆစ်, စာသားစတိုင်များ, အနုပညာဖောင့်နှင့်နောက်ခံတင်းပလိတ်များ၏ပုံစံမျိုးစုံတန်ချိန်နှင့်အတူသင်စိတ်ကူးဘယ်တော့မှနည်းလမ်းထူးခြားသောကျမ်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်သက်ရောက်မှု, frames များကိုများနှင့်စတစ်ကာများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- အခမဲ့ Drawing
- Wave ကို
- Horizontal / ဒေါင်လိုက်လိုင်း
ကျမ်း၏● Unlimited number ကို - မရတစျခုစာသားကို!
●စိတ်တိုင်းကျစာလုံး - သင့်ရွေးချယ်မှု၏ font ကို Add
●နောက်ခံတင်းပလိတ်များ၏တန်ချိန် - Instagram ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
●တစ်ဦးကအစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ - ဆိုးကျိုးများ, frames များကိုများနှင့်စတစ်ကာများ
●တစ်ပွင့်လင်းနောက်ခံနှင့်အတူ PNG format နဲ့တစ်ဦးချင်းစီကစာသားပို့ပါ။
●အပြည့်အဝ resolution ကိုအတွက်မှတ်တမ်း။
● SNS မှ Upload လုပ်ပါ။
Curve Download: မြို့ပတ်ရထားစာသားကို
သင်ဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်သလဲ ဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်ကိုကြောက်ရွံ့? မူရင်းယခုဆုံးဖြတ်ပါ! ဒီ application ကိုကူညီဤနေရာတွင်ပါ! သင်၏မေးခွန်း Create, အဖြေကိုပေါင်းထည့်ခြင်း, ဘီးလည်နဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရ!
အခုတော့ဆုံးဖြတ်! ကျပန်းသည်ဤအခြေအနေများတွင်သင်၏နောက်ခြေလှမ်းကို select နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအပေါ်ပျော်စရာစိတ်ကူးများပေးပါ။
အဘယ်မှာရှိသွားလာသနည်း ငါဘယ်စားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်သင့်သလဲ အဘယ်သူသည်စာသင်ခန်းထဲမှာဖြေဆိုကြမည်နည်း
• CUSTOM wheel: သင်ကပ်နိုင်သောတံဆိပ်များအရေအတွက်နှင့်အတူကိုယ်ပိုင်ဘီးန့်အသတ်အရေအတွက်က
•တဂ်ပိတ်ထား: ကို disable / ယာယီအချို့ရွေးချယ်မှုပပျောက်ဖို့တံဆိပ်များကို enable
• bulk အရေးကြီး: သင်သည်တိုက်ရိုက် clipboard ထံ၌သင်တို့၏ဘီးတံဆိပ်များ၏ကြီးမားသောစာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်
ပို့ကုန်• wheel: အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဘီးတင်ပို့နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသူတို့ကိုဝေမျှသို့မဟုတ်သင့် device များအကြားကသူတို့ကိုလွှဲပြောင်း
•မျှဝေရန်: သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များ Share
•ကျပန်းလှုပ်ခါပါ: ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ device ကိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဘီးပေါ်တွင်ကျပန်း reposition သင့်ရဲ့တံဆိပ်
•ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဘီး & Models
•အမှောင် / အလင်းအဓိကအကြောင်းအရာ
Instacall - မတ်ဖုန်းခေါ်
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 3,99 ။
Instacall ကိုအကောင်းဆုံးစမတ် dialer ဖြစ်ပါတယ် T9
• Speed ​​Dial ပံ့ပိုးမှု
Instacall function ကို Download လုပ်ပါ - စမတ်ဖုန်းခေါ်
ပိုပြီး 57 $ LightStrip Plus အား $ 12 အဖြူရောင်မီးသီး, - BGR
Sonos အပိုဆုနေ့ကမ်းလှမ်းလျှို့ဝှက်ချက်နှစ်ဦးအားအစဉ်အမြဲရရှိနိုင်ပါ - BGR